नेपाल आज | शिल्पाले रेखालाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि...
शिल्पाले रेखालाई अपशब्द प्रयोग गरेपछि...
उनले सुरुमै वोलेको शब्द हो– रेखा खराव। भिडियोमा भनिएको छ–‘रेखा खराव, छवि ओझासँग हुँदा हुँदै पनि १० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी।’
उनले यत्तिनै वोलेको यो भिडियो कतिपयले जस्ताको तस्तै टिकटकमा राखेका छन् भने कतिपयले सिल्पाको आवाजमा आफनो भिडियो राखेर पनि टिकटक वनाएका छन् । कतिपयले त वाख्राको फोटो राखेर समेत टिकटक वनाएको पाईएको छ।
तर, फ्याक्ट चेक गर्दा यो भिडियो गलत अर्थ लाग्ने गरी थोरै भाग मात्र काटेर टिकटक वनाईएको पत्ता लागेको छ। यो भिडियो निकै पुरानो पनि हो। ०७६ असारमा निर्मातासमेत रहेका पति छविराज ओझा विरुद्ध सिल्पाले काठमाण्डौ प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दिएपछि एउटा युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्ताबाट यो भिडियो लिएको पाईएको छ।
यो सवै थाहा हुँदाहुँदै किन विवाह गरेको भनेर उठिरहेका प्रश्नको जवाफ दिदै उनले भनेकी छिन्–‘त्यो सप्पै थाहा हुँदा हुँदै पनि किन गको ? सप्पै थाहा रैछ त भनेर मलाई त्यो पनि कमेन्ट आएको छ। गितान्जली दिदीको के भएको हो भनेर मैले अहिले मात्रै थाहा पाउँदैछु, त्यो पनि रेखा दिदीको मुखबाट। छविजीको मुखबाट सुन्दाखेरी चै मसँग विहे गरेर वस्दा वस्दै पनि अर्को केटासँग अफेयर चल्यो, अनि त्यसपपछि वहाँ डिप्रेसनमा गएर आत्महत्या गर्नु भयो भनेर वहाँको मुखबाट सुनें मैले।’
छविको भरोसा गर्दा अफु नराम्रोसँग फसेको उनले वताएकी छिन् । ‘म जोसँग संगत गर्छु मैले उसैको कुरा विश्वास गर्ने की सवैको कुरा सुन्दै हिड्ने । अफिसमा जो–जो आयो त्यस्को कुरा त सुन्ने हो नी होईन ?’ उनले भनेकी छिन्–‘बाँकी रह्यो रेखा दिदीको कुरा । रेखा दिदीसँग झगडा गर्दाखेरी म भखर नमस्ते नेपालमा पुगेको थिए । जो–जो आउँथे म नाम लिन्न अहिले। नाम चै लिन्न तर, वहाँहरुले के के भन्नुहुन्थ्यो त्यो चै भन्छु, म। रेखा खराव, छवि ओझासँग हुँदा हुँदै पनि १० जना हिरोहरुसँग सुत्दै हिड्ने केटी। छविजी त एउटा भएपछि पुग्ने मान्छेलाई त्यस्तो गरेर हिडी भन्थे। अनि छविजीले पनि ‘मैले त्यत्रो गर्दा गर्दै पनि छोडेर गई’ भनेर न्याउरो मुख वनाउनु हुन्थ्यो।’
‘अव म छविजीको कुरा पत्याउने की, न्युजको कुरा पत्याउने की रेखा दिदीसँग भेट्न जानेकी ? कसरी भेटन् जाउँ म ?’ भन्दै उनले भिडियोमा गुनासो गरेकी छिन् ।
शिल्पा पोखरेल रेखा थापा छवि ओझा